Top 5 iPhoto maka Windows 8 Alternatives
iPhoto bụ wuru na-foto ngwa na e dere a ùkwù ngwaọrụ n'ihi na ị na-enweta ihe na-etolite foto gị. Apple iwebata maka iPhoto-ekwu na ọ niile: "Site gị Facebook Wall gị tebụl kọfị gị ezigbo enyi Igbe mbata (ma ọ bụ igbe akwụkwọ ozi dị). Mee ihe na foto gị karịa gị mgbe chere na o kwere omume. Ma ime ya niile na otu ebe. IPhoto." Ma ebe ọ bụ na ukara iPhoto maka Windows, na Apple nwere atụmatụ nyak iPhoto maka Windows version, i nwere ike ịhụ ihe iPhoto ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ yiri atụmatụ dị. Ebe a ọtụtụ iPhoto maka Windows omume ga-ẹkenam.
Nhọrọ 1: Fantashow - Easy-eji ngosi mmịfe Onye kere
nhọrọ 2: DVD ngosi mmịfe Nrụpụta - Professional ngosi mmịfe Onye kere maka Windows
nhọrọ 3: Picasa - All-na-otu Photo Software
nhọrọ 4: Photo Gallery - Great Photo Manager na Editor
nhọrọ 5: Zoner Photo Studio Free - Free Photo Manager maka Windows
Na iPhoto, ị pụrụ nanị ike ụfọdụ mfe slideshows. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka slideshows dabara dị iche iche n'oge na nkeji, Fantashow bụ ihe dị gị mkpa. Ọ na-enye 200+ anya-akụta ngosi mmịfe gburugburu n'ihi na ị na-agbanwe photos, videos na music n'ime kediegwu fim ole na ole clicks. Ị pụrụ ọbụna tinye Intro / Ebe e si nweta ma ọ bụ ikpokọta ọzọ ekwekọghị ọnụ na-agwa ndị na akụkọ n'azụ foto na vidiyo na-amasị gị. Ọzọkwa, ị na-enwe ike ịzọpụta gị ngosi mmịfe dị ka video faịlụ, ozugbo ọkụ ya DVD ma ọ bụ post ka YouTube na Facebook. Mụta ihe banyere Fantashow >>
The ngosi mmịfe atụmatụ nke iPhoto dị nnọọ isi ma kpaara ókè. N'ezie, e nwere ọtụtụ ọkachamara ngosi mmịfe eso na Windows 8, nke ka ị na-eme ọtụtụ ihe ndị ọzọ pụtara ihe ngosi mmịfe karịa iPhoto nwere ike. Ka ihe atụ, Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe. Inye ọtụtụ 2D / 3D mgbanwe mmetụta, a usoro-enyere gị aka ka gị onwe gị ngosi mmịfe na photos, videos na songs. Ọ na-arụ ọrụ dị ka a amara. Ọzọkwa, ị na-enwe ike ịzọpụta gị ngosi mmịfe dị ka video faịlụ, ma ọ bụ na-akpọ ya na-DVD. Mụta ihe banyere DVD Slideshow Builder Deluxe >>
Ekiri ihe ngosi mmịfe sample kere na DVD ngosi mmịfe Nrụpụta maka Windows
The ezigbo iPhoto Ẹkot maka Windows bụ Picasa. Ọ bụ free foto software mepụtara Google na-enyere gị hazie, dezie, na ịkọrọ gị photos, dị ka ụzọ iPhoto na-eme. Ọ nwere ma Mac na Windows version. Ị nwere ike na-agbalị ịhụ na ọ bụrụ na ọ bụ ezi iPhoto maka Windows ọzọ.
Ọzọ dị ukwuu iPhoto ọzọ maka Windows usoro bụ Photo Gallery ngwa si ​​Microsoft. Nke a free omume nwere ike inyere gị aka mfe dezie, òkè na hazie dijitalụ photos, mgbe ya mfe na-eji interface mere ka ọ na-ewu ewu software oke maka Windows ọrụ.
Zoner Photo Studio Free bụ ihe ọzọ na ezi na ngwa na-kwesịrị nchebara echiche nke ma ọ bụrụ na ị na-achọ a Windows version nke iPhoto. Ọ na-ahapụ ị na-echekwa, hazie, na ọbụna ịkpado gị ihe oyiyi. Ọzọ oké mma bụ na kalenda, panoramas, na kọntaktị Ibé akwụkwọ nwekwara ike ngwa ngwa kpọkọta si foto faili.
> Resource> Windows> iPhoto maka Windows 8 (PC Photo Manager)